November | 2009 | မောင်ဂုရု သရော်သည်။
Reasons to becomeastatistician
Filed under: statistician — gurugyi @ 10:01 am
Tags: guru, gurugyi, maths, reasons, satire, statistician, statistics
၁။ သွေဖည်ခြင်းဆိုတာ ပုံမှန်ပဲလို့စဉ်းစားရင်
1) Deviation is considered normal
၂။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြည့်စုံတယ် လုံလောက်တယ် လို့ထင်တယ်။
2) We feel complete and sufficient
၃။ ပျမ်းမျှချစ်တတ်သူတွေ ပေါ့။
3) We are “mean” lover.
၄။ တစ်ဦးတည်း အဆက်မပြတ် လုပ်နေတယ်။
4) Statisticians do it discretely and continuously.
၅။ အမြဲတမ်း ၉၅ % တော့ မှန်နေတာပဲ။
5) We are right 95% of the time.
၆။ တစ်ယောက်ယောက် ရဲ့ နောက်ကွယ်က ဖြန့်ဝေတဲ့ ကိစ္စတွေကို တရားဝင် သုံးသပ်ပေးတယ်။
6) We can legally comment on someone’s posterior distribution.
၇။ ပုံမှန်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြောင်းလို့ရတယ်။
7) We may not be normal but we are transformable.
၈။ သေချာပါတယ်လို့ ဘယ်တော့ မှ ပြောစရာမလိုဘူး။
8) We never have to say we are certain.
၉။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် သိသိသာသာကို ကွဲပြားတယ်။
9) We are honestly significantly different.
၁၀။ ဘယ်သူမှ ဒီအလုပ်ကို လာမလုဘူး။
10) No one want our jobs.
ဆီလျော်အောင် ဘာသာ ပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ ဟာတွေက ဆိုလိုရင်းကို ငဲ့ ပြီးဘာသာပြန်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် တကယ့် အဓိပ္ပါယ်နဲ့ တော့ မတူပါဘူး။ မှားတယ်ထင်လည်း ကိုယ့် ဟာကိုယ်သာ ပြန်လိုက်ပါ။ စာရင်းအင်းပညာရှင် တွေကတော့ သဘောကျပါတယ်။ အဖြစ်က အဲဒီလို ဖြစ်နေတာကိုး။
Filed under: Uncategorized — gurugyi @ 1:51 pm
ခုတင်ပဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် က http://myanmarbloggersociety.ning.com/forum/topics/blog-00 ဆိုတဲ့ နေရာကို သွားကြည့်ခိုင်းလို့ သွားကြည့်တာ မဆိုးဘူးဗျ.. ရယ် (ရီ) ရသား…
(ဆရာ (ကြီး)) ဒဂုံတာရာ က ART ဆိုတဲ့ စကားကို အနုပညာလို့ ပြန်လိုက်တဲ့ အခါမှာ အနုပညာဆိုတာ ကြီး နံမည်တွင် သွားတော့သကိုး။ (သူ့စကားနဲ့ ပြောကြည့်တာ) အဲဒီအခါမှာ မြန်မာ စာပေသမိုင်းမှာ မြန်မာမှုပြုချင်သူတွေ အတော်တော်များများ က မြောင်းထဲက ရေညှိလိုပဲ မစိုက်ပဲ ပေါက်လာလိုက်ကြတာ အိုး… တင်းကြမ်း…(သတ်ပုံ မှားရင် ခွင့်လွှတ်နော်..)
ဟိုက oxford dictionary မှာ စကားလုံး အသစ်ထပ်ထည့်တာ.. ဝိုင်းကဲ့ရဲ့ နေကြတာ… ဒီမှာ မြန်မာမှုပြုတာလေးနဲ့ အော်ဟစ်နေလိုက်ကြတာ.. ဟိုနားကျွတ်စီကျွတ်စီ.. ဒီနား ကျွတ်စီကျွတ်စီ … နားကို ညီးပီး မျက်စိကို ညောင်း နေတာပဲ…
ဘာလုပ်မလဲ… မြန်မာမှုမှာ အင်မတိအင်မတန် လှပတဲ့ စကားလုံး အရင်းအမြစ် တွေရှိတာပဲ ( ဖြတ်ပြောရဦးမယ်.. အရင်းအမြစ်ကို english မှု မပြုနဲ့နော်… resource မဟုတ်ဘူး… လျှောက်ပြု နေရင် နောက်လာ နောက်သားတွေ အမှတ်မှားကုန်ဦးမယ်…)
ကြည့်စမ်းဗျာ… ဓါတ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေး… ဓါတ်ပုံတဲ့… လူတိုင်းသိတယ် ၂ မျိုးရှိမှန်း… လူပုံရယ်.. လူကကျတဲ့ အပုံရယ်… ဟော… ဓါတ်ရှင်တဲ့… (နောက်ကျတော့ ရုပ်ရှင်ပေါ့) … ဓါတ်ရောင်ခြည်တဲ့… ဓါတ်မီးတဲ့… ဓါတ်ပြားတဲ့… ဓါတ်လုံးတဲ့… ဓါတ်သားတဲ့… ဓါတ်ခဲတဲ့… လွယ်တယ်… ရင်းနှီးပြီးသား.. အာလည်း ထိတယ်… ဗမာလည်း ဆန်တယ်… သုံးပါလား.. ဓါတ်နဲ့ မတွဲရသေးတဲ့ စကားတွေ အများကြီး…
ဓါတ် + မှတ်တမ်း = ဓါတ်တမ်း… (ကဗျာတောင် ဆန်သေး… မင်းဆီကို ကိုယ် ဓါတ်တမ်းလေး ပို့လိုက်တယ်… ဆိုပီး ကြူလို့လည်း ကောင်းတယ်.. ကဗျာ့ဓါတ်တမ်း တို့ ဘာတို့ ဆို မလှလား)
ဓါတ် + အင်တာနက် = ဓါတ်နက် ( ဟော.. ဒါလေးကျတော့… ဘယ်လောက် ထိသလဲ… နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ကြည့်လို့ရတယ်… ဟေ့ တို့.. ဓါတ်နက်ဆိုင်သွားရအောင်… ကွာ… )
ဓါတ်+ သတင်း = ဓါတ်တင်း ( လာ ကောင်မရေ.. တို့ ဓါတ်တင်းပြောရအောင်)
ဓါတ် + motherboard = ဓါတ်ဘုတ် ( အကို ရေ.. ဓါတ်ဘုတ်လဲရမယ်… ဖွတ်ကလိနည်းနည်းနဲ့ လုပ်ပေးပါ့မယ်…)
ဓါတ် + software = ဓါတ်ပျော့ (နာမ်) (တခါတည်း အဘိဓါန် ဝင် အောင် နောက် ဓါတ်ပျော့ (ကိ) နဲ့ မမှားရအောင်…
ဓါတ် + hardware = ဓါတ်မာ (နာမ်) ( အကို ရေ.. ဓါတ်မာ အရှင် များများဆန့်တာက ကုန်နေတယ်… နောက်လမှ ရောက်မယ်တဲ့.. )
ကဲဗျာ… ဘယ်လောက် ကောင်းလိုက်လဲ… လှလိုက်တဲ့ စကားလုံးလေးတွေ… နောက် ဂြိုဟ်… တို့… ရုပ် တို့.. တွဲလုံးလေးတွေ အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်… ဘာလည်း ဗျာ.. ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေ….
Filed under: Uncategorized — gurugyi @ 7:00 am
အချစ်နှင့် စစ် သည် မတရားပါ။ မူရင်းကတော့ အချစ်နှင့် စစ်တွင် တရားသည် မရှိဟု ဆိုပါသည်။ လူတိုင်း အချစ်နှင့် မကင်း ဟု ဆိုသော သူများလည်း ရှိတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တြိယုတ္တိဗေဒအရ လူတိုင်းမတရားပါ။ မတရားသော လူများသည် တရားမျှတမှုအကြောင်း လွန်စွာ ပြောတတ်ပါသည်။ တရားမျှတမှုကို မြတ်နိုးကြသည်။ အဘယ်အချိန်တွင် ပြောတတ်သနည်း ဆိုပါလျှင် မိမိအကျိုးစီးပွားကို တိုက်ရိုက် ထိပါးလာမည့် အချိန်တွင် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော့် ကို ထိခိုက်လာနိုင်သော အခြေအနေ နှင့် မကြုံခင်ထိ ကျွန်တော် မတရားပါ။
ကဗျာဆရာ ရှယ်လီကို ကျောင်းမှ ထုတ်ပစ်လိုက်သော်လည်း နောက် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ကြာသည့်အခါ ထိုကျောင်းတွင် သူ၏ ရုပ်တုကို ထုလုပ်ပြသထားပါသည်။ တစ်ချိန်သောအခါတွင် ကျွန်တော် ရေးခဲ့သော ဘလော့များကို စုဗူး တွင် featured posts of guru ဆိုပီး ပြချင်လည်းပြလိမ့်မည်။ မပြချင်လည်းပြမည် မဟုတ်ပါ။ ခုတော့ ကျွန်တော့်ကို ထုတ်မပစ်သေးပါ။
စိတ်ကူးကောင်းများစွာသည် လောက ကို ထုဆစ်သည်ဟု တစ်နေရာရာတွင် တစ်ယောက်ယောက်ရေးထား သည်ကို ဖတ်ဖူးသည်ဟု ထင်ပါသည်။ စိတ်ကူးကောင်း ရှိသူများ မြန်မာပြည်တွင် များစွာရှိပါသည်။ တစ်ချို့ က ကွန်ဒုံးပေါ်တွင် “ငါ့ကို သုံးပါ ဘေးကင်းကွာ” ဟု စာရေးထားရန် စိတ်ကူးပါသည်။ အနည်းငယ် ဂွကျသည်က လွဲပီး စိတ်ကူးကောင်းပါသည်။ တစ်ချို့က “ကြွက်ရောင်းရန်ရှိသည်” ဆိုသော စာသားကဲ့သို့ “ခြင်ရောင်းရန်ရှိသည်” ဟု စာရေး ထားခြင်းဖြင့် ခြင်မရှိအောင်လုပ်ရန် စိတ်ကူးပါသည်။ တစ်ချို့ က ဓါတ်လုံးခေတ်မှ ဓါတ်ပြားဖြစ်လာပီ တော်တော်လေးကြာရင် ဓါတ်ချောင်းတွေ ခေတ်ဖြစ်လာတော့ မည်။ ဓါတ်ချောင်း ကို ကြိုတင် ကြံစည်ထားရင် ကောင်းမည် ဟု စိတ်ကူးကြပါသည်။ ကောင်းကြပါသည်။ စိတ်ကူးကောင်းများသည် လောကကို ဖန်တီး၏။
ဓါးသွားထက် ကလောင်သွားထက်၏ ဟု ပညာရှိတစ်ပါးက ပလွတ်ပလွတ် လုပ်သွားပါသည်။ ကျွန်တော်တော့ ကလောင်တစ်ခါမှ မရှဘူးပါ။ ဓါးတော့ ခဏခဏ ရှပါသည်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကလောင်သွားထက် ဓါးသွားထက်ပါသည်။ ဗမာပြည်တွင် ကလောင် မသုံးတော့ပါ။
ဆေးလိပ်ကုမ္ပဏီကြောင့် ယောကျာင်္းဖြစ်သူ အဆုပ်ကင်ဆာဖြစ်ရသည့် အတွက် ကုမ္ပဏီအား ကျန်ရစ်သူ မိန်းမမှ တရားစွဲ ပီး လျော်ကြေးတောင်းသော ဖြစ်ရပ် အမေရိကန်တွင် နားစွန်နားဖျား ကြားဖူးသည်ဟုထင်ပါသည်။ ကျွန်တော် လည်း ဒေါ်ဘုမရောင်းသော လက်သုပ်များစားပီး ဝမ်းသွားပါသည်။ ဒေါ်ဘုမကို တရားစွဲရပါအံ့။ ဒေါ်ဘုမ အမေရိကန်ကို ကြွခဲ့ပါ။
Filed under: satire — gurugyi @ 5:50 am
Tags: guru, gurugyi, letter, mysuboo, satire
ဟဲ့.. ဒီမှာ.. ဒါမှီ… နယ်ပြန် ပြီး နံပြေ ဘုရားမှာ ထမင်းနယ် နဲ့ နင့်နံမည် သဓ္ဒါမှီ လို့ ပြောင်းတာကို ငါ ဒါမှီလို့ ခေါ်သည်။ အလံကုန်ထူထားတဲ့ နင်တို့လို လူကုံထံတွေရဲ့ မာနကို ငါ ခဝါ မချနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နင်တို့လို လူယဉ်ကျေးတွေရဲ့ လေးကြောင်းမျဉ်းမှာ လောင်းကြေးက လင်ယူကြေးများ ဖြစ်နေသလားဟာ။
ငါကျပ် နေတာမဟုတ်ဘူး။ မကျေနပ်နေတာ။ အိတ်ကျန်ခဲ့လို့ အံကြိတ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ အသာနည်းလို့ အသဲနာနေတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ နင် က အကျဖက်ကဆိုတော့ ကြက်ဖလို ပြောရရင် ” မင်း ရှိုးချင်သလိုရှိုး.. ပီးရင် သုတ်တော့ ဒိုး ” လို့ ပြောလိုက်ယုံပေါ့။ ဒါပေမယ့် နင့်ကို သုတ်တော့ ဒိုးခိုင်းတော့ ငါ့မှာလည်း သိုးတော့ … အဲ.. လူပျိုသိုး ဖြစ်ကျန်ခဲ့တာပေါ့လေ။
နင် မမိုက်ဘူး။ မမူးဗိုက်ကြီးတာ ရည်းစားကို ယားတိုင်းစီးလို့ဆိုတာ နင်သိရဲ့သားနဲ့ဟာ။ နင် အသည်းစားဘီလူးမ။ အသားပဲ ဆွဲတတ်တဲ့ ဗလမူးတုန်းက နင်ဘာလို့သူ့အိမ်သွားလည်း။ အဲတော့ သူက နင့်ကို သူ့ရည်းစားဆိုပီး… ဆိုပီး… ထားလိုက်ပါတော့။
နင်အပိုင်ခုထင်ပီး ဖင်ခုထိုင်ထားတာတွေက တစ်ချိန်ကြရင်တော့ လက်လွှတ်လိုက်ရလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့မှ နတောင်းဟောက်ပက်နဲ့ နောင်တရမနေနဲ့။ နင်နဲ့ငါနဲ့ကတော့ ပြတ်ပြီ။
စာကြွင်း။ ။ ဖေါင့်သည်းခံဖတ်ပါ။
(မောင်မောင် ဇော်လတ်၏ သင်္ကြန်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို မှီငြမ်းသည်။)
Sharing eBooks in Myanmar Language
Filed under: Uncategorized — gurugyi @ 5:36 am
Tags: eBooks in Myanmar